Wednesday June 28, 2017 - 07:07:47
Dadka Soomaaliyeed ee degan Gobolada waqooyi ee Jamhuuriyada Soomaaliya oo gumeyste Ingiriis ah gacanta ugu jiray ayaa maalin Axad ah 26 june sanadkii 1960 waxa ay madax banaanida ka qaateen Ingiriis oo in mudo ah u talinayay.
Dadaal badan, Isu soo baxyo lagu taagerayo gobanimada, isku marxabeen, damaashaad kadib waxaa halkaasi laga taagay calan Soomaaliyeed markaasina waxaa wali gacanta gumeystaha Taliyaaniga ku jiray Dadka Soomaaliyeed ee degan Koonfureed Soomaaliya.
Nasiib wanaag waxaa isla dhamaadka todobaadkaas maalinnimo Jimca ah oo ay taariikhdu ku beegneyd 1-da Luuliyo isla sanadkii 1960 Xurnimadooda Taliyaani ka helay dadka Soomaaliyeed ee degan Koonfurta Soomaaliya sidaasi ayuuna Geyiga Dhulka Soomaalida oo dhan uu xur ku noqday balse kadib maxaa dhacay?
Hadii aad nolosha ku ekeyso kaliya aaga aad taqaano waxaa hubaal ah in aadan dhaafi doonin halkàaga isla markaana aadan gaari karin Dhamaadkaaga sidaasi awgeed Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi ee Soomaaliya oo farxad ay ka muuqato ayaa waxa ay calanka keeneen gobolada Koonfureed kadibna waxaa halkaasi looga dhawaaqay Jamhuuriyda Soomaaliya.
Halkaasi ayay ka bilaabatay talaabada Dad iyo Dal Soomaaliyeed oo ixtaraam iyo karaamo kuwada nool dunida laga aqoonsanyahay Sharaf iyo karaamo aan baryo ku imaanna looga hayo, Dowladnimada dhowr sanadood kadib ayaa waxaa dhacay qaladaad ay qoonsadeen dadka Soomaaliyeed ee deganaa Gobolada waqooyi Galbeed ee Soomaaliya balse kadib Dowladii Soomaaliya ayaaba burburtay.
Waqtiyada adag ee aad soo martay waxa ay soo shaac bixin u noqdaan awoodo badan iyo karti adiga ku jirtay Dadka Soomaaliyeed Ee gobolada waqooyi degan waxa ay Sameesteen maamul u gaar ah si ay Soomaaliya uga go’aan oo ay banaanka ka istaagaan balse si walba oo aad tahay ama aad u qurux badantahay hadii aadan dhameestirneen waxaa tahay qof wali qabyo ah Soomaaliyana meelna kuma kala harto.
Soomaaliya waa dhul cabirkiisu yahay 637,657 Kiiloomitir laba jibaaran waxaana ku nool in ka badan 10 Malyan oo qof Halka Dhulka Soomaaliyeed ee Gobolada waqooyi lagu qiyaaso in uu yahay 137,600 kiiloomitir laba jibaaran dadka ku noolna waxa lagu qayaasay (4) afar Malyan oo qof, hadii la kala jaro dhulka waxaa farqi ah oo u dhaxeeya
637,657 – 137,600 = 500,057 kiiloomitir oo laba jibaaran mana aha wax yar.
Dhulka koonfurta Soomaaliya ku yaala waxa uu ka weynyahay in ka badan afar jibaar dhulka waqooyiga Soomaaliya ku yaala Dadka dega jihooyinka Soomaaliya waxa ay ka badanyihiin dadka degan waqooyi Galbeed Soomaaliya si walba ha ahaato waxa ay Soomaali isku daba socto maaha dhaqaale, dano gaar ah, ee waa jaceylkii iyo farxadii soo bilaabatay 26 june iyo 1-da luuliyo.
Siyaasiyiinta iyo dadka gobolada waqooyi ee sanadkii 1960 waxa ay ahaayeen dad aragti fog leh oo soo raadsaday dad walaala ah balse waxaa lamid ahaa Siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed ee degnaa koonfurta Soomaaliya oo xiligaasi waji furnaan iyo farxad kusoo dhaweeyay.
Gaba gabo mar kale hada sanado badan kadib waxaa Soomaali u dan ah in ay meel wax kuwada cunaan cadowga Soomàaliyana hal meel looga soo wada jeesto waxaana kusoo koobayaa 57 sano kadib hada calanka waxaa laga soo wadaa Koonfurta Soomaaliya waxaana Soo wadaan Siyaasiyiinta iyo Shacabka Soomaaliyeed, ee sidii kuwii 1960 waqooyi ka yimid loogu soo dhaweeyay koonfur ha loo soo dhaweeyo kadibna haleysku raaco Mar Kale Kanna Siib Kanna saar.
Xuska Maalinta Caalamiga Ah Ee Joojinta Dacadiyada Saxaafada
Warbixin Ka Hadlaysa Jabhadihii Ku Midoobay Dhismaha Puntland 1998-dii
Munaasbadda Xuska Maalinta Caalamiga ah Dhimbirka Oo Lagu Qabtay Muqdisho
Xoghayaha QM Oo Warbixin Kooban Ka Siin Doona Golaha Amaanka